Poem – HlaMin
Update : January 8, 2022 Tekkatho Moe War ဘဝ​ဖြစ်တည်မှု စက္ကန့်ပေါင်းကုဋေကုဋာတစ်လျှောက်လုံး ခက်ခဲစွာရပ်တည်လာရသည်။စီးပွားရေး ရော လူနေမှုအဆင့်အတန်းပါနိမ့်ကျ ပြီးအိမ်ထောင်မှု တည်ဆောက်ရန်ပင် အခက်အခဲတွေ့၊ အိမ်ထောင်မှုတည်ပြီးသူတွေလည်း ရုန်းကန်ခဲ့ရသော၊ ဖြတ်သန်းရ ဖြတ်သန်းဆဲ ခေတ်ကာလတစ်လျှောက် ဒုက္ခ နှင့် ကြုံဆုံခဲ့ရပုံကို –မောင်စိန်ဝင်း ရေးခဲ့သော “လှေပေါ်မှာ” ကဗျာ နှင့်စာရေးသူ ၁၉၈၈ က ရေးခဲ့သော “ကဗျာလက်ဆောင်” ကဗျာ တို့ကို…. စာဖတ်သူ ကဗျာမြတ်နိုးသူ အများ ခံစားနိုင်ရန် အောက်တွင် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ” လှေပေါ်မှာ ” တစ်သက်မဝေးအောင်လို့ငှက်ကလေးတွေ အစာကျွေးယတြာပေးသမျှကိုလည်း ချေဖူးတယ်။ မွေးနေ့ဆို […]
By Hla Min (Lifelong Learner) on January 6, 2022 • ( Leaveacomment )
Update : January 6, 2022 Space Race In 1957, USSR launched the Sputnik. Soon, Yuri Gagarin became the first cosmonaut to orbit the earth. USA was left behind in the Space race. NASA NASA (National Aeronautics and Space Administration) was formed. President Kennedy’s historic speech : “Before the […]
Update : January 4, 2022 Received 17 e-mail responses after I wrote the “Saya Pu Zaw Pwe” poem. All of them mentioned about my “hidden talent”. Onlyafew knew that I had written articles and translations with pen names such as “Tekkatho Ga Ga Na Na” for […]
Update : January 4, 2022 SPZP-2002 Saya U Moe Aung (Tekkatho Moe War) and team published the Commemorative Issue of Swel Daw Yeik Sar Saung for SPZP-2002 held in Singapore in December 2002. Sayar reprinted my poem “SAYA PUZAW PWE” on the Back Cover of the Sar Saung. […]
Update : January 4, 2022 Rhyme (or Kar Yan) is an essential element of Poetry. Outer Rhyme In most English poems, the end of specific lines rhyme. Some Burmese will call them “Ah Pyin Kar Yan” (Outer Rhymes). Common patterns A B A B (where the first and […]
By Hla Min (Lifelong Learner) on January 4, 2022 • ( 1 Comment )
Update : January 4, 2022 I would like to shareapoem andavariant ofasong that I learnt in my youth. FATHER (Old Poem) Be kind to your father For when you were young Who loved you as friendly as he He caught the first […]
Update : January 4, 2022 By Maung Sein Win (Padeegone) with comments by Wynn Htain Oo (M72) ခင္ေမာင္တိုးသို႔တမ္းၿခင္း အစဥ္ထာ၀ရ၊တြယ္တာႀကေပမဲ႔ သခၤါရနဲ႔တရားခ်င္႔ေတာ႔….. သြားႏွင္႔ေပါ႔.. သြားႏွင္႔သူငယ္ခ်င္း…… ၀ိပသ၁နာတရားအားထုတ္ႀကေစရန္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလမ္းၿပေပးခဲ႔ပါေသာကိုယ္တိုင္လဲက်င္႔ႀကံအားထုတ္ပါေသာသူငယ္ခ်င္း ငါတို႔၀မ္းနဲမွဳကေပၚထြက္တဲ႔သံေ၀ဂေႀကာင္႔တမလြန္ကေက်နပ္ေနမွာပါ I providedatranslation the poem as comments to that posting. Though we would like to be together eternally by the laws of Sankhara […]
Update : January 4, 2022 မျက်ဖြေ လင်္ကာ(အနန္တသူရိယ) Translated by Zin Yaw Gyi သူတည်းတစ်ယောက်၊ ကောင်းဖို့ရောက်မူသူတစ်ယောက်မှာ၊ ပျက်လင့်ကာသာဓမ္မတာတည်း။ As for the betterment of one, somebody else has to perish;So goes the law of Dhamma admonish ရွှေအိမ်နန်းနှင့်၊ ကြနန်းလည်းခံမတ်ပေါင်းရံလျက်၊ ပျော်စံရိမ်ငြိမ်စည်းစိမ်မကွာ၊ မင်းချမ်းသာကားသမုဒ္ဒရာ၊ ရေမျက်နှာထက်ခဏတက်သည့်၊ ရေပွက်ပမာတစ်သက်လျာတည်း။ Jubilees and coronations ever in that golden palace;Luxurious seats attended […]
Update : January 4, 2022 Poets Tekkatho Moe War Saya U Moe AungLaureate Poet, Distinguished Author, Editor and Publisher Maung Sein Win (Padeegone) Literary Award Winner Okpo Maung Yin MaungSaya U Aung MyaingOrganizer, Contributor Maung Nyunt Htay (Ah Htet Min Hla)Saya U Nyunt Htay Win Myint (M72)U Win […]